Iintsholongwane zomoya ezibulala iintsholongwane - i-Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
Isibulali isibulali somoya esiphathwayo
Umatshini wokubulala iintsholongwane kuMoya
Izatifikethi kunye neeNgxelo
Ityhubhu yokuCoca umoya
Ifriji Deodorizer kunye neFreshener
I-FAUCI yomoya ibulala i-Robot FAQ
Isebenza njani le robhothi yokubulala iintsholongwane?
Impendulo: Irobhothi ilungele ukubekwa kwindawo enomhlaba othe tyaba kunye nendawo efanelekileyo. Emva kokwenza useto olufanelekileyo ngokwemiyalelo yokusebenza, kunye nokwenza amanyathelo ahlukeneyo okusebenza, inokusetyenziswa ngesiqhelo.
Ingaba le ntsholongwane ibulala iintsholongwane kwaye iyicoca njani?
Impendulo: Le robhothi isebenzisa ibhegi yangaphandle yokubulala iintsholongwane ukukhupha isibulali magciwane esicocekileyo kunye nococeko, kwaye ngelixa usebenza kuyo yonke indawo, isasaza isibulali magciwane esicocekileyo kunye nococeko emoyeni ojikeleze irobhothi ngokuhamba komoya wengxowa yokubulala iintsholongwane. Ukunqanda nokubulala iintsholongwane okanye intsholongwane nangaliphi na ixesha ezinokuvela emoyeni.
Ithini into ekhutshweyo yintsholongwane? Nceda ucacise.
Impendulo: Inqaku le-bactericidal ikakhulu liqukethe izinto ezimbini --- i-chlorine dioxide kunye ne-ROS (i-oksijini esebenzayo).
I-Chlorine dioxide sisizukulwana esitsha esamkelwa kwilizwe liphela esisebenza ngokufanelekileyo kunye nesibulali-ntsholongwane esikhuselekileyo. Abantu bahlala besebenzisa isisombululo samanzi esiyi-chlorine dioxide. Ukusebenza kwayo kwe-disinfection kungama-2.6-10 amaxesha aphindaphindiweyo kwizibulala-ntsholongwane njenge-75% yotywala, i-chlorine, kunye ne-asidi ye-hypochlorous. I-gaseous chloride dioxide echanekileyo inokusasazwa ngokulinganayo emoyeni kwisimo se-molekyuli ye-nano-scale, ke ine-50-100 yamaxesha aphezulu okusebenza kwe-disinfection;
Uhlobo lwe-ROS olusebenzayo lweoksijini lubhekisa kumasuntswana eoksijini asebenzayo anjengehydroxyl free radicals kunye ne peroxy free radicals, ezingqinelanayo nezinto eziphambili ezibulala iintsholongwane emzimbeni womntu, kwaye ziveliswa kukubola kunye nokwahlulwa kwamanzi. Ukusebenza kwe-disinfection ukusebenza kwala masuntswana eoksijini asebenzayo aphezulu kunalawo acocekileyo erhasi yeklorini dioxide. Nangona kunzima kakhulu ukubulala uhlobo lweebhaktheriya ze-endospores ezikhoyo eMhlabeni, i-ROS inokuyiphelisa ngokukhawuleza. (I-ROS oksijini esebenzayo inemisebenzi ephezulu kunye nobomi obufutshane. Kuphela sisixa somkhondo esikhoyo kufutshane nezinto zokubulala iintsholongwane ezakhelweyo)
Nguwuphi umgaqo wento ebulala iintsholongwane ukubulala intsholongwane, ukungunda kunye neentsholongwane?
Impendulo: Iindonga zeseli, inwebu yeseli kunye neeprotein imizimba yeebhaktiriya okanye zomngundo, ziya kutshabalaliswa kukubola kwe-chlorine dioxide kunye neROS. Iintsholongwane zizinto ezingezizo ezeselula kwaye azinazindonga zeseli, ngenxa yoko zinokubola ngokulula kwaye zitshabalalise ukubola kwe-oxidative.
Ke ngoko, nokuba loluphi uhlobo lweebhaktiriya, ukungunda, okanye intsholongwane, nokuba ziyanyangeka okanye ziguqukile, akukho mahluko ubalulekileyo kwimpembelelo yokubola kwe-oxidative kuzo ezenziwa yiklorine dioxide kunye neROS.
Ngokukodwa, ngaba irobhothi yokubulala iintsholongwane ingayibulala i-COVID-19 kunye nokwahluka kwayo?
Impendulo: Amazwe amaninzi athe ngokusemthethweni i-chlorine dioxide inokubulala i-COVID-19 kunye nezinto zayo.
Kuba iiarhente zovavanyo aziboneleli ngeenkonzo zokuvavanya intsholongwane ye-COVID-19 okwangoku, okwangoku akukho ngxelo yokuvavanywa kwemveliso ngqo.
Nangona kunjalo, ngoFebruwari 4, 2020, iKhomishini yezeMpilo yeSizwe yase China yakhupha "Isaziso kuLuhlu oluNgxamisekileyo loLuhlu lweeNtsholongwane ezithile ngexesha loThintelo noLawulo lweNtsholongwane yeNtsholongwane kaGawulayo yaseCoronavirus". ; NgoFebruwari 19, iKhomishini yezeMpilo yeSizwe yase China yakhupha "Izikhokelo zokuSetyenziswa kweeNtsholongwane zokubulala iintsholongwane" ukuphendula ubhubhane, oludwelise izibulala-ntsholongwane ezahlukeneyo ezazisetyenziselwa ukubulala i-COVID-19. Kuluhlu, i-chlorine dioxide yokubulala iintsholongwane ichazwe njengefanelekileyo ukubulala iintsholongwane.
Ngale ngxelo isemthethweni ingentla, ngokungangqalanga ibonisa ukusebenza kwale mveliso ekubulaleni i-COVID-19, kwaye kwangaxeshanye, i-ROS ine-disinfection ufanisi ephezulu.
Ngapha koko, amandla e-COVID-19 alala kwindawo yayo yokufihla emva kokungena emzimbeni womntu, ayisiyonto inamandla ngokwawo. Kwimeko engaphandle, i-COVID-19 isengozini kakhulu kwi-chlorine dioxide kunye neoksijini esebenzayo. Ingxaki kukuba xa ingena emzimbeni womntu, kunzima ukubulala kunye nokukhuseleka ngokukhuselekileyo kwitekhnoloji yonyango yangoku.
Xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo ezikhuphisanayo kwintengiso, yintoni umahluko kunye nezibonelelo?
Impendulo: Uninzi lweemveliso ezifanayo kwimarike ikakhulu ziirobhothi zokutshiza ezibulala iintsholongwane, ezitshiza i-hypochlorous acid okanye isisombululo se-chlorine dioxide emoyeni kwifom ye-aerosol yokubulala intsholongwane kunye neebhaktiriya ezisemoyeni. I-Hypochlorous acid iya kuvelisa ngokungathanga ngqo igesi yekhlorine, kwaye uxinzelelo lwenkungu yesisombululo se-chlorine dioxide siphezulu kakhulu, esiya kubangela ingozi emzimbeni womntu. Ezi ntsholongwane zintsholongwane azivumelekanga ukuba zisetyenziswe phambi kwabantu. Kwakhona, intsholongwane yokubulala iintsholongwane ifafazwa nje emoyeni, yiyo ke loo nto isekude ukuba isasazwe ngokulinganayo, inika ukuba ukubulala iintsholongwane kunye nokucoca inzalo kube sezantsi kakhulu.
Izinto ze-FAUCI AAPG ezakhiwe kwi-FAUCI Air Disinfecting Robot zikhupha kancinci zikhuselekile kwaye zisebenza ngokucocekileyo nangokufanelekileyo ii-molecule ze-chlorine dioxide kunye ne-ROS ioksijini esebenzayo. Kwelinye icala, iyabamba kwaye ibulale iintsholongwane ngokuthe ngqo emoyeni, ezinokuthintelwa kwaye zilawulwe ngexesha lokwenyani. Ngapha koko, ixabiso eliphantsi kakhulu elikhuselekileyo linokunika isibulali magciwane kunye nococeko, kwaye aluyi kubangela monakalo kubantu kwigumbi elinye
Ngaba iindlela zokubulala iintsholongwane zale Robot yomoya yokubulala ikhuselekile ukuba zingasetyenziswa?
Impendulo: Inqanaba le-ROS yeoksijini esebenzayo eveliswe kumphezulu wento eyakhelwe-ngaphakathi ye-FAUCI AAPG yale mveliso iyafana neyona nto ibaluleke kakhulu nengalinganiyo emzimbeni womntu obulala iintsholongwane kunye neebhaktiriya. Ikwayinto yendalo kwaye ikuluhlu lomkhondo. Inenzuzo kwaye ayinabungozi emzimbeni womntu;
Ngokubhekisele kwi-ClO2, ayinabungozi abathathu (i-carcinogenic, teratogenic, mutagenic) kwaye kwinqanaba elikhuselekileyo lesibulala-ntsholongwane. Chlorine dioxide isibulali-zintsholongwane sele iqinisekisiwe kuvavanyo lwenzululwazi lwexesha elide kunye nemiboniso ephindaphindwayo, kwaye yamkelwe njengefanelekileyo ukusetyenziswa kwezonyango nakwezempilo, ukubulala iintsholongwane ekutyeni, ulondolozo lokubulala iintsholongwane, unyango lwamanzi okusela, njl. Ulawulo lweeDrug GB5749 kunye ne-GB2760, inokusetyenziswa njengamanzi okusela isibulala-zintsholongwane kunye nesongezelelo sokutya. Kwi-WHO enxulumene nokusingqongileyo emsebenzini kunye nemigangatho yesizwe yamazwe ahlukeneyo, umda ophezulu woxinzelelo oluvumelekileyo lwe-ClO2 kwindawo ephindaphindwayo kunye nexesha elide lokusebenza yi-0.3mg / m³, kwaye ukukhutshwa kweemveliso zethu kuqinisekiswe ngokupheleleyo ngaphantsi kwalo mgangatho;
Kwangelo xesha, izixhobo zerobhothi ezakhelwe ngaphakathi ze-FAUCI AAPG zigqithile kuvavanyo lwe-CMA / CNAS olufanelekileyo: ukugqitywa kovavanyo lokutyhefu lwe-inhalation kubonisiwe kungabinetyhefu; ukuvavanywa kweseli micronucleus kuko konke okungalunganga, oko kuthetha ukuba akukho kuguquka kweseli kwaye akukho tyhefu yemfuza;
Izinto ezakhelwe ngaphakathi ze-bactericidal materials (izinto ze-FAUCI AAPG) kunye neemveliso ezinxulumene nale mveliso zisetyenziswe ngokubanzi e-China nakwamanye amazwe ukusukela ukuphela kwe-2019 kuthintelo kunye nolawulo lwesifo se-COVID-19, kwaye akukho mpendulo ichaseneyo. ifunyenwe ukuza kuthi ga ngoku.
Loluphi uvavanyo kunye nokuqinisekiswa kwesi sifo sokubulala iintsholongwane okwangoku?
Impendulo: Iirobhothi zethu zilupasile uhlolo olufanelekileyo lomzimba obhalisiweyo we-CNAS, kwaye bafumana isiqinisekiso se-EU CE-ROHS, isatifikethi se-FDA, isiqinisekiso seMSDS, iiNgxelo zoVavanyo lweNtsholongwane, iiNgxelo zoVavanyo lweNtsholongwane ye-H1N1, iiNgxelo zoVavanyo lwe-Staphylococcus Albus, zoLuntu Iingxelo zovavanyo ze-Enterovirus 71, iiNgxelo zovavanyo ze-Escherichia Coli.
Ngawaphi amanyathelo okhuseleko ekusebenziseni iirobhothi ezibulala iintsholongwane?
Impendulo: "Kukho izinto zombane kwiphakheji yokubulala iintsholongwane, engenakuhlanjwa;
Should Akufanele ixutywe nezinye izinto zokubulala iintsholongwane okanye i-alkaline.
Xa irobhothi imile, kufuneka igcine umgama ongaphezulu kwe-1 yemitha kwizinto zentsimbi nakwimpahla yokunxiba;
Ukuba i-robot yokubulala iintsholongwane isebenza ngokuqhubekayo ngaphakathi, ngaba imaski isadingeka?
Impendulo: Kusafuneka unxibe imaski kwindawo enobungozi kakhulu xa umntu enokunxibelelana ngokusondeleyo nabaphethe i-COVID-19.
Ngenxa yeemeko zokuhamba komoya, izinto ezinobungozi bentsholongwane ezikhutshwe yimveliso zisenokungagubungeli umlomo, impumlo kunye nendawo yamehlo, ngakumbi xa amathontsi wentsholongwane ehlasela kufutshane okanye ngesantya esiphezulu (njengokuthimla), kusetyenziswa isithintelo somzimba Iyafuneka, ke imveliso kunye nemaski zisetyenziswa kakuhle ngokudibeneyo.
Eminye imibuzo emitsha
Impendulo: Malunga noku, ndiya kuqinisekisa nabasebenzi besebe elifanelekileyo lenkampani yethu kwaye ndiphendule emva koko.
Imithombo yeendaba esemthethweni